Impawu - anatod
Senza iinkqubo ezizimeleyo ze-ISP. Sidibanisa kwinethiwekhi yakho kwaye asiyikuyifaka. Inkqubo ilawula kwaye ilawula abathengi bakho ngokuzenzekelayo.
Inkokhelo yenyanga ngokutsho kwentlawulo kunye nokongezwa komthengi ngamnye. Kwakhona inokwenzeka yokwenza ii-invoyisi zomsebenzi.
Ii-invoice kwiiMali zaseKhaya, iiDollar, ii-Euro zidibene.
Udibaniso lwamalungiselelo amaninzi
Kwiingcaphephe zesitrato. Jonga imisebenzi yemihla ngemihla, inkxaso / ufakelo lolwazi lwetikiti. Idityaniswe neMephu zikaGoogle kunye neGeolocation.
Ukulawulwa kwamabango kunye neengxaki zobuchwepheshe zabathengi, ngokudibeneyo kunye ne-Mikrotik, i-Ubiquiti kunye neCambium kwisisombululo esiphezulu.
Idibeneyo neGoogle Maps API ye-geolocation yabaxhasi.
Inkqubo ye-Checkin - i-checkout yokungena kunye nokuphuma kokulawula, kunye ne-geolocation ye-technician kwikhaya lomthengi.
Thatha ulawulo lwazo zonke iinkcukacha kunye nokukhula kwenkampani yakho.
Ukuqhagamshelana kweMaphu kunye neendowuni zobuchwepheshe beGoogle Maps.
Fumana ulwazi lwenkxaso yangempela kubaxhasi bakho nge-Mikrotik, i-Ubiquiti.
Abathengi bakho baya kuba nokufikelela kwi-APP yokuzilawula apho banokufikelela khona i-akhawunti yokukhangela, ukwenza iintlawulo, ukujonga imeko yenkonzo, ukucela inkonzo yobugcisa, ukufumana izaziso.
Unokwenza ezininzi iinkqubo zokusebenza njengoko ufuna. Umsebenzisi ngamnye uya kuba neemvume kwimodyuli nganye kwinkqubo yokulawula ukhuseleko lwenkqubo.
Isininzi kunye nokuthumela umntu ngamnye kwe-SMS, i-imeyile, iSaziso se-PUSH, i-WhatsApp.
Ukulawula ii-invoyisi kunye ne-akhawunti yangoku yabathengi bakho. Unokudibanisa isitokethi sezinto zokusebenza ngokubhekiselele kwi-invoyisi yokuthenga.
Sidibanisa ne-Paypal, i-MercadoPago, i-AFIP, i-SAT, i-OxxoPay, i-Digital Collection, i-SEPA, hlawula i-akhawunti yam, i-Red Link, i-Enacom, i-Payu, phakathi kwabanye.
Descargue nuestro folleto de presentación en pdf.